IValeria-Kula MaXesha Okuphela-Ukuhla ukuya eBukumkanini
Inenekazi lethu ukuze	UValeria Copponi NgoDisemba 1st, 2021:
Ntombi yam, awusakhumbuli ukuba ndandiqala ukukubuza ukuba ndandithetha ngantoni nawe? Ndifuna ukukukhumbuza ngayo, ntombam: Ndiyayidinga intlungu yakho ie “Ndifuna umnikelo we [icacisiwe] ubunzima bakho.” Inqaku lomguquli. - ihlabathi liyatshintsha yaye abantwana bam bebeya kugwetywa ukuba uthile onobubele ebengandincedi ngokunikela uNyana wam ukubandezeleka kwabo ukuze kusindiswe abona bazalwana noodade babuthathaka kwanabo bangalithobeliyo iLizwi likaThixo. KwabaseKolose 1:24 , uPawulos ubhala oku: “Ngoku ndiyavuya ezintlungwini zam ngenxa yenu, yaye enyameni yam ndiwuzalisa oko kusileleyo kwiimbandezelo zikaKristu, ngenxa yomzimba wakhe, olibandla . . . I IKatekism yeCawa yamaKatolika uyacacisa, ‘Umnqamlezo lidini elikhethekileyo likaKristu, “umlamli omnye phakathi koThixo nabantu”. Kodwa ngenxa yokuba kubuntu bakhe obungokobuthixo othe ngandlel’ ithile wazimanya nomntu wonke, “ukuba nako ukwenziwa amadlelane, ngokokwaziwa kukaThixo, emfihlekweni wepasika” kunikelwa kubo bonke abantu. Ubiza abafundi bakhe ukuba ‘bawuthabathe umnqamlezo [wabo] baze bamlandele’, kuba “noKristu weva ubunzima ngenxa yethu, esishiya nomzekelo, ukuze silandele emanyathelweni akhe.”’ ( n 618)
Ndiyaxolisa ngayo yonke into oyivayo kodwa ndicela ungandilahli: uluncedo olukhulu kum. Ndiyakudinga, ke qhubeka nendlela owaqala kuyo uhambo lwakho kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Andinakuqinisekisa ukuba ukusukela namhlanje ubomi bakho buza kutshintsha kwaye awusayi kuphinda ubandezeleke, kodwa ndiyakuqinisekisa ukuba ekubandezelekeni, ndiya kuba kufuphi kuwe kwaye ndikuxhase. Uzakufuna eminye imiphefumlo eza kundinceda ngomthandazo, kodwa uyabona ukuba inzima lento ngalamaxesha. Qhubeka [isininzi ukusuka apha ukuya ekupheleni komyalezo] emi kufutshane nam; Ndixhase ngomthandazo wakho Cenacles kula maxesha okuphela kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba anizukuzisola.
Namhlanje ndikucela ukuba uhlale usondele kum: NdinguMama wakho - ungaphila njani ngaphandle kothando lwam? Ukususela ngoku thandaza kwaye uzile ukutya, nikela iimbandezelo zakho ukuze usindise abo ubathandayo kunye nabo bonke abazalwana bakho abangakholwayo. Ndinithanda kakhulu; Andisoze ndikulahle. Kula maxesha okugqibela ndiya kusondela ngakumbi kuwe. Ndiya kuthandaza kuSomandla ukuba akufinyeze ukubandezeleka kwakho. Amaxesha aya kugqitywa kwaye ekugqibeleni siya kuvuya kunye eluthandweni lukaThixo.
Kholwani kum: Andiyi kunishiya neenceba zikaMtyholi. Ndiyanisikelela kwaye ndiya kuqhubeka ndinikhusela ekuhendweni.
ie “Ndifuna umnikelo we [icacisiwe] ubunzima bakho.” Inqaku lomguquli.
KwabaseKolose 1:24 , uPawulos ubhala oku: “Ngoku ndiyavuya ezintlungwini zam ngenxa yenu, yaye enyameni yam ndiwuzalisa oko kusileleyo kwiimbandezelo zikaKristu, ngenxa yomzimba wakhe, olibandla . . . I IKatekism yeCawa yamaKatolika uyacacisa, ‘Umnqamlezo lidini elikhethekileyo likaKristu, “umlamli omnye phakathi koThixo nabantu”. Kodwa ngenxa yokuba kubuntu bakhe obungokobuthixo othe ngandlel’ ithile wazimanya nomntu wonke, “ukuba nako ukwenziwa amadlelane, ngokokwaziwa kukaThixo, emfihlekweni wepasika” kunikelwa kubo bonke abantu. Ubiza abafundi bakhe ukuba ‘bawuthabathe umnqamlezo [wabo] baze bamlandele’, kuba “noKristu weva ubunzima ngenxa yethu, esishiya nomzekelo, ukuze silandele emanyathelweni akhe.”’ ( n 618)
exhonyiweyo imiyalezo, UValeria Copponi.
← UGisella-Intlungu yam...
ISibhalo-Xa I-Tyranny iphela →